Fampisehoana soavaly feno | Soavaly Noti
Iray amin'ireo fifehezana mpitaingin-tsoavaly feno kokoa, araka ny tondroin'ilay anarana dia ny fifaninanana feno o fitsarana telo andro. Fitambarana fifehezana mpitaingin-tsoavaly telo toy izany akanjo, miampita firenena ary mampiseho mitsambikina.
Fifaninanana hoy Manaraka ny baiko voalaza etsy ambony izy ireo ary tanterahina amin'ny hafainganam-pandeha iray isan'andro. Na dia fitafiana aza dia atao ao anatin'ny roa andro. Araka ny hitanao, ny fifaninanana feno dia fifehezana sarotra izay hahafahana mankafy azy dia tsy maintsy fantatsika tsara ny pitsopitsony.
Ao amin'ity habakabaka ity Ho hitanao ny zava-drehetra mifandraika amin'ny fifaninanana feno. Torohevitra, fifaninanana ary antsipiriany hafa momba an'ity fifehezana ity izay tena be pitsiny nefa haingana be.
Zava-dehibe amin'ny soavaly fifaninanana ve ny proteinina?
ny rose sanchez hace 5 taona .
Ny soavaly dia tsy maintsy ampidirina sakafo amin'ny sakafo. Indrindra ireo soavaly mifaninana. Vao mainka ny ...
Tantaran'ny maody tandrefana
ny rose sanchez hace 6 taona .
Ny fomba fanao andrefana dia momba ny fomba na fitsipi-pitondra-tena izay nivoatra hatramin'ny nandresen'i Amerika sy ...
Fantatry ny manampahaizana sy psikology fanta-daza fa ny fitsaboana soavaly, fantatra amin'ny anarana hoe equine therapy, dia mahasoa tanteraka ...
Ny fifehezana mpitaingina olimpika
ny danigraffi hace 10 taona .
Nandritra ny zato taona mahery, ny mitaingin-tsoavaly dia noheverina ho anisan'ny Lalao Olaimpika fa tsy ao anatin'ny ...